iilitha ezincinci zepellet yokusetyenziswa kwekhaya,umgubo omncinci wepellet wentengiso-umnqobi wepellet
Amandla:3kw,isigaba esinye okanye izigaba ezithathu
Umthamo:50~ 80kg / h
iilitha ezincinci zepellet zincinci ngokobukhulu, uyilo kunye nolwakhiwo olunomthamo ongama-50-80kg / h wokwenza iipellets zokutya.Iimayile ezincinci zepellet yokusetyenziswa kwekhaya yimali yombane egalelwa ngombane ngombane 200 mm ubukhulu kufa, Imingxunya yokufa inokuba ntle kakhulu nangawuphi na ubungakanani obungathanda. Ungazisebenzisa ukuqhubekeka nenkunkuma eyahlukeneyo yezolimo kunye nehlathi, njengokucoceka kwenkuni, umgubo wombona, umququ, irayisi husk, igobolondo kernel kunye nezinye izinto ezilahliweyo kwiipellets. Ingxolo ephantsi, ukusebenza okuphezulu kunye nokuguquguquka okuphezulu, lo matshini we-pellet mncinci ngowakho matshini we-pelletizing.Flat die pellet mill iza ngaphambili kwimarike kune-ring die pellet mill.the ikhaya le-pellet mill yenzelwe ekuqaleni kwenkulungwane yama-20 ngokusekwe kwiflethi yokusweleka.. Inqaku layo eliphambili lolwakhiwo kukuba kufa kwayo kungqengqelanayo nothotho lwee-roller ngaphezulu kwayo. Xa usenza iipellets, i powders zezixhobo eziluhlaza ziwa phantsi phakathi kwendawo efayo eflethini kunye nabaqengqelezi. Emva koko abaqengqelezi bacinezela ezi powders kwimingxunya emincinci kwiflethi bafe ukuze benze iipellets. Kamsinya nje kuvela iipellets kwelinye icala leflethi, uthotho lweempuku ziya kubacola ubude obufanayo obugqityiweyo. Ke, iipellets zokugqibela ezinobude obufanayo ziyenziwa. iiminer ezincinci ze-pellet zisetyenziswa ikakhulu ekusebenziseni umntu ngamnye nasekhaya, Njengombala wekhaya wepellet kulula ukushukuma nokusebenza.
Iimpawu ezincinci zemill pellet
1. Iqhutywa ngumbane wombane yenza ukuba ukonga amandla ngakumbi kunye nokusingqongileyo.
2. I-Smmall pellet mill iyathengiswa yenziwe ngezinto ezingavakaliyo ngenxa yoko inobomi obude benkonzo
3. Inkqubo yokuhanjiswa kuyabonakala, ke kufanelekile ukusombulula iingxaki ngexesha.
4. Isakhiwo esilula, indawo encinci yokugubungela, ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa.
5. Le mill yekhaya pellet inokusetyenziswa okuphantsi, amaxabiso okhuphiswano kunye nokonga iindleko.
6. Iisuntswana zombane ezincinci zombane zinokuqhubekeka ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwiipellets ezincinci zokutya kwizilwanyana ezinjengeentlanzi, iimbadada, inkukhu, umvundla, yehagu, njl.
Ukusetyenziswa kweeMill zePellet eNcinci
★ Ilungele ukuqhubekeka ngeendlela ezahlukeneyo zokutya okuziinkozo kwiipellets ezincinci zokutya njengenkuku, idada, amarhanisi, izigwaca kunye nemfuyo kubandakanya neenkomo, inkomo, umvundla, yehagu, njl.
★ Iinkukhu zombane ezondla ngombane ekhaya zithandwa zizityalo ezincinci zepellet, ifama yokufuya, kwifama yeenkukhu.
Kutheni ukhetha Imbewu encinci yePellet Mill ye-CHICKEN yakho?
Le yenkukhu yondla iimitha ezincinci zepellet kwifama encinci yenkukhu okanye ukusetyenziswa kwasekhaya kwahlukile kwezinye iimayile zokutya zepellet.. Ngokuphathelele inkukhu, zigcinelwe ukukhula ngokukhawuleza kunye nempilo. Ukutya kwenkukhu kufuneka kugxininise umxholo wesondlo kunye nezithako. Siphuhlise ipelletizer yekhaya elenzelwa ekhaya kwaye sigxile ekwandiseni ingqibelelo yesondlo kunye nokuqina kunokukhawulezisa inkukhu ukuba ibe ngaphezulu kwesiqhelo. Yintoni egqithisile, inkukhu kwizigaba ezahlukeneyo zokukhula zifuna ubungakanani obuhlukeneyo bokutya kweepellets, ngomatshini omncinci wepellet, unokwenza i-pellets zokutya ukusuka 2-10 mm, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
I-VTKLP230 11 300~ 500 320 1.15*0.48*1.05
Umboniso we-pellet mill encinci